cloud data တွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းဖို့ပြောလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ | Myanmar Mobile App
Home Trending Social cloud data တွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းဖို့ပြောလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
cloud data တွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာသိမ်းဆည်းဖို့ပြောလိုက်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
Security guards stand at the reception desk of the Amazon India office in Bengaluru, India, August 14, 2015. E-commerce giant Amazon.com is taking lessons learnt from its daily battles with India's choked roads and cramped cities to some of its largest developed markets, exportingamodel of cheaper deliveries and reduced warehousing costs. Picture taken August 14, 2015. To match AMAZON.COM-INDIA/LOGISTICS REUTERS/Abhishek N. Chinnappa
သူဟာ privacy ကိစ္စတွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံအတွင်းမှာသာ အချက်အလက်တွေသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် ပြောဆိုတော့မှာပါ။ နိုင်ငံတွင်းက ဆာဗာတွေပေါ်မှာသာ အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းပေးဖို့ အစိုးရအဖွဲ့က အလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ intelligence agencies တွေအနေနဲ့လည်း စုံစမ်းချင်တဲ့အချိန်မှာ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ panel ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kris Gopalakrishnan ကတော့ ဘာမှပြောထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သြဂုတ်လနဲ့ စက်တင်ဘာ၁၅ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ အီလက်ထရောနစ်နဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာနကို ပြောထားပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ကလည်း ဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်း၊ လက်တွေ့ပိုင်းတွေအားလုံးကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုအားတွေ များနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Amazon ၊ Apple နဲ့ Microsoft တို့လို Cloud ကိုမှီနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ဒေသတွင်းဆာဗာတွေတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ သုံးစွဲသူတွေကို အခကြေးငွေတိုးမြှင့်ကောက်ခံရမယ့်အနေအထားရှိနေပါတယ်။ privacy ပိုင်းအရဆိုရင်လည်း အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ စကားပြောဆိုမှုတွေ၊ အခြားသော အချက်အလက်တွေကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေမှာပါ။
အချက်အလက်တွေကို ကုဒ်ဖွက်ထားတဲ့ဆားဗစ်တွေကိုလည်း ဒေသတွင်းမှာပဲထားစေမှာပါ။ အိန္ဒိယအနေနဲ့ ကုဒ်မဖွက်အောင်လို့ တားဆီးချင်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် မသိမ်းခင်မှာ သူတို့ကိုပို့ရမယ်ဆိုပြီးလုပ်မလား။ သေချာတာကတော့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကမောက်ကမတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယကို စွန့်ခွာသွားကြမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
သူဟာ privacy ကိစ်စတှကေို တိုးမွှငျ့လုပျဆောငျနပေါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံကလညျး အငျတာနကျလုပျငနျးတှကေို နိုငျငံအတှငျးမှာသာ အခကျြအလကျတှသေိမျးဆညျးဖို့အတှကျ ပွောဆိုတော့မှာပါ။ နိုငျငံတှငျးက ဆာဗာတှပေျေါမှာသာ အခကျြအလကျတှကေိုသိမျးဆညျးပေးဖို့ အစိုးရအဖှဲ့က အလိုရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျဆောငျမှုကွောငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုနဲ့ intelligence agencies တှအေနနေဲ့လညျး စုံစမျးခငျြတဲ့အခြိနျမှာ အလှယျတကူအသုံးပွုနိုငျစမှောပါ။
ဒီအကွောငျးကိုတော့ panel ရဲ့ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Kris Gopalakrishnan ကတော့ ဘာမှပွောထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး သွဂုတျလနဲ့ စကျတငျဘာ၁၅ရကျအတှငျး အကွောငျးပွနျမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကိုတော့ အီလကျထရောနဈနဲ့သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာ ဝနျကွီးဌာနကို ပွောထားပါတယျ။
တရုတျနဲ့ ရုရှားတို့ကလညျး ဒီလိုမြိုးလုပျဆောငျနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ ကငျြ့ဝတျပိုငျး၊ လကျတှပေို့ငျးတှအေားလုံးကို ကွိုကျနှဈသကျပွီး လုပျဆောငျလိုအားတှေ မြားနတောဖွဈပါတယျ။ Amazon ၊ Apple နဲ့ Microsoft တို့လို Cloud ကိုမှီနတေဲ့လုပျငနျးတှအေနနေဲ့ ဒသေတှငျးဆာဗာတှတေညျဆောကျဖို့လိုအပျပွီးတော့ သုံးစှဲသူတှကေို အခကွေးငှတေိုးမွှငျ့ကောကျခံရမယျ့အနအေထားရှိနပေါတယျ။ privacy ပိုငျးအရဆိုရငျလညျး အာဏာပိုငျတှအေနနေဲ့ စကားပွောဆိုမှုတှေ၊ အခွားသော အခကျြအလကျတှကေို ထောကျလှမျးနိုငျစမှောပါ။
အခကျြအလကျတှကေို ကုဒျဖှကျထားတဲ့ဆားဗဈတှကေိုလညျး ဒသေတှငျးမှာပဲထားစမှောပါ။ အိန်ဒိယအနနေဲ့ ကုဒျမဖှကျအောငျလို့ တားဆီးခငျြမလား၊ ဒါမှမဟုတျ မသိမျးခငျမှာ သူတို့ကိုပို့ရမယျဆိုပွီးလုပျမလား။ သခြောတာကတော့ လုပျငနျးတှအေတှကျ ကမောကျကမတှဖွေဈမှာဖွဈပွီးတော့ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးဈေးကှကျတဈခုဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယကို စှနျ့ခှာသှားကွမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
Previous articleiPhone ၊ iPad တိုင်းမှာ Apple Pencil အသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
Next article၆.၁ လက်မရှိတဲ့ Dual-SIM Dual Standby iPhone ကို တရုတ်နိုင်ငံမှာသာလျှင် ရရှိမည်